သောကများတဲ့ ဆက်ဆံရေး | သိလိုရာမေး
သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုက ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုပြီးကောင်းအောင် အဓိပ္ပါယ်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုပဲ သာယာမှုမရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကတော့ ကျွနု်ပ်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို စိတ်သုဉ်းစေပြီး ပူပန်ကြောင့်ကြမှုတွေသာ ဖြစ်စေပါတယ်။ သင်ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း သင့်သိတဲ့တစ်ယောက်ယောက်သော်လည်းကောင်း သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ တခုခုမှားယွင်းနေရင် ဒါက တယောက်တည်း ဖြစ်ပျက်ခံစားနေရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်တော့ လူတော်တော်များများက သူတို့ နာကျင်ခံစားရတာတွေ၊ ပူပန်ကြောင့်ကြရတာတွေ ၊ ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေကို ကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားနဲ့ လိင်ခြားနားမှုတွေ အပေါ်မူတည်မနေဘဲ လူတိုင်းက ပူပန်ကြောင့်ကြနေရတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို ခံစားတွေ့ကြုံနေရနိုင်ပါတယ်။
ပူပန်သောကများစေမယ့် ဆက်ဆံရေးရဲ့ လက္ခဏာရပ်များ
ဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ သာယာတဲ့ဆက်ဆံရေးကနေ ပျော်ရွှင်မှုတွေပျောက်ကွယ်စေမယ့် အပြုအမူတွေ ရုတ်စွအဆုံး ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားတာတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာ ဖွင့်ဟနိုင်ဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို မှားယွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကို သွေဖီဦးတည်စေမယ့် အချက်ပြလက္ခဏာရပ်တွေကို သတိထားပါ။
သင့်အဖော်က သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ သင့်ရဲ့ ဆဲလ်ဖုန်း (သို့) ဖေ့စ်ဘွတ်(ခ်)ကိုစစ်ဆေးတာတွေ
အလွန်မင်း သဝန်တိုတာတွေ၊ စိတ်မချမှုတွေဖြစ်တာတွေ
စိတ်တိုပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ ဒေါသတွေ သူတို့မှာရှိတာတွေ
သင့်အဖော်က သင့်ကို တစ်သီးတစ်ခြား တယောက်တည်း နေခိုင်းတာမျိုးတွေ (မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ခွင့်မပြုတာတွေ)
မှားယွင်းတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေကို လုပ်ခြင်း
သင့်ဘဝရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာတွေ(သင်ဘယ်နေရာကိုသွားလဲ၊ သင်ဘာဝတ်လဲ၊ သင် ဘယ်သူနဲ့ အပြင်သွားတာလဲ)
သင့်ကို မကြာခဏ လေးစားမှုမရှိတာတွေ (သင့်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို ပြက်ရယ်ပြုတာတွေ သင့်ကို မထိုက်တန်ဘူးလို့ ခံစားရအောင်လုပ်နေတာတွေ)
ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ထိလက်ရောက် နာကျင်အောင်လုပ်တာတွေ
Even if you have had sex before, it doesn’t necessarily mean that you were ready. If you feel uncomfortable at all, it’s okay to say no and have your partner respect your decision. On the other hand, if you partner puts up the stop sign, make sure you respect their decision. Regardless, talk it out!
အသည်းကွဲဝေဒနာ ကုစားနည်း ၄ သွယ်
လူတိုင်းလိုလို တစ်ကြိမ်မဟုတ်တစ်ကြိမ်တော့ အချစ်ကို ထိတွေ့ခံစားဖူးကြသူတိုင်း အသည်းကွဲကြဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။